Warbixinta Xuquuqda Aadanaha ee Q/Midoobay ee lagu xusay in ciidamo Somali ah oo la geeyay Tigray (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
CaalamkaSomaliTooshka GJXog cusub
Warbixinta sanadlaha ah ee Wakiilka Sare ee Qaramada Midoobay Xuquuqda Aadanaha iyo warbixinnada Xafiiska Wakiilka Sare iyo Xoghayaha Guud ayaa lagu xusay inay heleen warar iyo warbixinno ku saabsan ciidamo Soomaali ah oo laga qaaday xeryaha tababarka dalka Eritrea, laga geeyay Gobolka Tigray.
Warbixinta hada socota waxaa loo diyaariyey iyadoo la raacayo qaraarkii Golaha Xuquuqul Insaanka ee 44/1, kaasoo Goluhu ku kordhiyay waqtiga Ergeyga Gaarka ah xaalada xuquuqda aadanaha ee Eritereya.
Warbixintu waxay ku saleysan tahay u kuurgalida Ergeyga Gaarka ah Mohamed Abdelsalam Babiker iyo macluumaadka laga soo ururiyey ilo kale oo kala duwan. Warbixinta, Ergeyga Gaarka ah wuxuu si guud mar ah uga waramay walaaca xuquuqda aadanaha ee Eriteriya, wuxuuna qeexayaa horumaradii ugu dambeeyay iyo qaar ka mid ah caqabadaha xuquuqda aadanaha ee dalka ka jira, oo ay ka mid yihiin xarig aan qarsoodi ahayn, xarig aan loo meel dayin iyo xarig, xaalado xabsi oo ka baxsan bini’aadamnimada, militari aan xad lahayn. adeeg, xoriyatul qawl, ra’yi, urur, aaminaad diimeed iyo dhaqdhaqaaq, la’aanta sharciga iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee halista ah ee gobolka Tigreega ee Itoobiya oo ay geysteen ciidamada Eritrea.
Warbixintu waxay soo koobeysaa muddadii 5 May 2020 ilaa 28 April 2021. Iyadoo ay ugu wacan tahay faafida cudurka coronavirus (COVID-19) iyo xaddidaadaha la xiriira dhaqdhaqaaqa, iyo wada shaqeyn la’aanta dowladda Eriteriya, Ergeyga Gaarka ah wuxuusan awoodin inuu booqasho booqasho ku tago dalka Eriteriya inta lagu gudajiray mudadii lagu jiray dib u eegista.
Warbixinta waxay ku saleysan tahay macluumaadka ay soo aruurisay Ergeyga Gaarka ah iyadoo u kuurgalaysa xaalada xuquuqda aadanaha meel fog iyo macluumaadka ay bixiyeen ilo kale, oo ay ku jiraan ururada bulshada rayidka ah, hay’adaha Qaramada Midoobay, lacagaha iyo barnaamijyada, iyo bulshada deeqaha bixiya. Iyadoo la raacayo Xeerka Anshaxa ee Habka Gaarka ah ee Hayayaasha Hay’adda Xuquuqda Aadanaha, ayaa warbixin qabyo ah lala wadaagey Dowladda Ereteriya si loogu siiyo fursad ay kaga hadasho aragtida iyo natiijooyinka Ergeyga Gaarka ah.
Waxaa xusid muran in warka kooban ee ku xusan warbixinta (Bogga 6-aad Paragraph 1) , kuna saabsan ciidamada Soomaaliya ee tegay Tigray ay tahay warar soo gaaray iyo warbixinno uu ergeygu helay oo aan wadan wax caddeymo ah.
HOOS KA AKHRISRO WARBIXINTA OO DHAMMNEYSTIRAN
Click to access A_HRC_47_21_E.pdf
Previous articleDowladda Eritrea oo Mareykanka ku eedeysay inuu taageerayo dagaalka ay wado Jabhadda Tigray
Next articleDayacaadii Dowladda & Da’yartii loo qaadey Dalka Eriterea…!!! (Qormo Dareen xambaarsan)